UngaNxibelelana Njani ngempumelelo naBaphembeleli | Martech Zone
NgoLwesibini, Novemba 30, 2021 NgoLwesibini, Novemba 30, 2021 Alexander Frolov
Intengiso ye-Influencer ikhawuleze ibe yinto elawulayo kulo naliphi na iphulo lophawu oluyimpumelelo, lifikelela kwixabiso lemarike $ 13.8 yezigidigidi kwi2021, kwaye elo nani kulindeleke ukuba likhule kuphela. Unyaka wesibini wobhubhane we-COVID-19 uqhubeke nokukhawulezisa ukuthandwa kwentengiso ye-influencer njengoko abathengi bahlala bexhomekeke ekuthengeni kwi-Intanethi kwaye bonyusa ukusebenzisa kwabo amaqonga eendaba ezentlalo njengeqonga le-e-commerce.
Ngamaqonga afana ne-Instagram, kwaye kutshanje TikTok, ukuphumeza ezazo iimpawu zorhwebo lwentlalo, kukho ithuba elitsha elivelayo leemveliso zokusebenzisa abaphembeleli ukwandisa izicwangciso zabo zorhwebo loluntu.
I-70% yabasebenzisi be-intanethi base-US banokuthi bathenge iimveliso kubaphembeleli ababalandelayo, kunye nokunyuka okulindelweyo kwentengiso ye-US yentlalontle nge-35.8% iyonke. ukuya ngaphezulu kwe-36 yeebhiliyoni zeerandi kwi 2021.
Statistica kwaye Intelligence Yangaphakathi
Kodwa ngokukhula kwamathuba enkxaso kubaphembeleli, akunakuthintelwa ukuba intlaninge ingene kwindawo esele igcwele, nto leyo eyenza kube nzima nangakumbi ukuba iibrendi zifumane umphembeleli ofanelekileyo anokusebenza naye. Kwaye ukuze intsebenziswano ye-influencer-brand ibe yeyona isebenzayo kubaphulaphuli ekujoliswe kubo, kubalulekile ukuba ubambiswano lube lolwenyani, olusekwe kwimidla efanayo, iinjongo kunye nezimbo. Abalandeli banokubona ngokulula ngezithuba ezixhaswayo ezingeyonyani ezivela kubaphembeleli kwaye kwangaxeshanye, abaphembeleli ngoku banobunewunewu bokwala izivumelwano zenkxaso ezingahambelani nohlobo lwabo.
Ukuze uphawu luseke ubudlelwane bexesha elide kunye nabona baphembeleli babalaseleyo kwiphulo labo, ngokwesidima kunye ne-ROI, kufuneka bagcine ezi ngcebiso zilandelayo xa benxibelelana nabona baphembeleli banqwenelekayo:
Phanda ngempembelelo ngaphambi kokuba ufikelele
Sebenzisa uphando kunye nezixhobo zokuqonda ukuchonga abaphembeleli abanxibelelana nabaphulaphuli ojolise kubo kwaye banxibelelane nebrand yakho. I-51% yabaphembeleli bathi esona sizathu sabo siphezulu sokungabambisani nophawu olusondela kubo seso abaluthandi okanye abaluxabisi uphawu. Ukulungisa uluhlu lwabaphembeleli abanxulumana ngokwenyani nexabiso lentengiso kuya kuba neyona mpembelelo intle kwiphulo, njengoko izithuba zabo ziya kuba yinyani kubaphulaphuli babo, kwaye banokusebenza nawe kwasekuqaleni.
Iimveliso kufuneka zikhuthale ekuvavanyeni umgangatho wabaphulaphuli abaphembelelayo njengoko zininzi iiakhawunti ezinokuba nabalandeli bokwenyani. I-45% yeeakhawunti ze-Instagram zehlabathi kulindeleke ukuba zibe ii-bots okanye iiakhawunti ezingasebenziyo, ngoko ke ukuhlalutya isiseko sabalandeli bempembelelo kubalandeli bokwenyani kunokuqinisekisa ukuba naluphi na uhlahlo lwabiwo-mali oluchithiweyo lufikelela kubathengi bokwenyani, abanokubakho.
Yenza umyalezo wakho ube ngowakho
Abaphembeleli abananyamezelo, kwaye akufanelekanga, xa kufikwa ekusondelweni kwabo ziimpawu ezinegeneric, ezisikiweyo kunye nemiyalezo yesimbo sokuncamathisela, ngaphandle kokwenza umntu kubo okanye iqonga labo. I-43% itshilo ukuba Ungaze okanye ungafane ufumane imiyalezo eyeyakho ukusuka kwiibhrendi, kunye nobuninzi bolwazi abaphembeleli bathanda ukwabelana nge-intanethi, ii-brand zinokusebenzisa ngokulula oku ukuze kuxhamle bona ukwenza ngokwezifiso isandi sabo.
Iibrendi kufuneka zichithe ixesha kunye namandla efunda ngomxholo wazo ofanelekileyo wabaphembeleli ukuze benze umyalezo olungiselelwe umntu ngamnye, ohambelana nethoni kunye nesimbo sabo. Oku kuya kwandisa amathuba okuba lowo uphembelelayo ekuthethwa ngaye avume ubambiswano, kwaye akhuthazeke ngakumbi ekuthumeleni umxholo obandakanyekayo.
Yiba ekuhleni ekufikeleleni kwakho okokuqala
Sukubetha etyholweni – ukucaca, kunye nokungafihli nto ngundoqo xa uceba imiqathango yobambiswano lwakho nomntu onempembelelo. Xa uqhuba unikezelo lwakho lokuqala, qiniseka ukuba ujongana nesakhelo ngaphambili kubandakanya iinkcukacha ezibalulekileyo ezinje ngokuba yintoni na imveliso, amaxesha okuthunyelwa, uhlahlo lwabiwo-mali, kunye nezinto ezilindelekileyo. Oku kwenza ukuba umntu ophembelelayo enze isigqibo esinolwazi ngakumbi, ngokukhawuleza ngakumbi kwaye ivumela amaqela omabini ukuba aphephe ukukhuhlana ngakumbi endleleni.
Kunyanzelekile ukuba iibhrendi zibethe ithowuni elungileyo kunxibelelwano lwazo nabaphembeleli abathandwayo ukuze kukhuseleke ubambiswano olunentsingiselo, oluyinyani kunye nokuphucula amaphulo abo okuthengisa. Njengoko ishishini lokuthengisa elinempembelelo liqhubeka liphumelela, iibrendi kuya kufuneka ziqhelane nayo.
tags: kwenziwa kanjaniindlela yokunxibelelana nabaphembeleliUngayifaka njani impembeleloumxhasinefutheukuthengisa okunempembelelo
UAlexander uyi-CEO kunye nomseki-mbumba kwiHypeAuditor. UAlex uye waziwa kaninzi kuLuhlu lwaBadlali abaPhambili abangama-50 ngokuThetha ngefuthe lomsebenzi wakhe wokuphucula ukungafihli ngaphakathi kushishino olunempembelelo. UAlex ukhokela phambili ekuphuculeni ukungafihli ngaphakathi kolu shishino kwaye wenza eyona nkqubo iphambili yokujonga ubuqhetseba esekwe kwi-AI ukuseta imigangatho yokwenza ukuba intengiso ibe nefuthe elifanelekileyo, elubala nolusebenzayo.